Mpanamboatra sy orinasa vita amin'ny kibon'ny karbonina avo lenta indrindra | Wanhoo
Ny fibre karbaona dia fibre avo lenta tsy misy fotony miaraka amin'ny atin'ny karbaona avo kokoa noho ny 90%, izay niova avy tamin'ny fibre organika tamin'ny alàlan'ny fitsaboana hafanana. Izy io dia fitaovana vaovao manana toetra mekanika tena tsara. Tsy ny toetra mampiavaka ny gazy karbonika ihany no ananany, fa koa manana ny fibre lamba malefaka sy azo zahana. Izy io dia taranaka vaovao misy fibre nohamafisina. Ny karbaona karbonika dia fitaovana fampiasana roa tonta, izay an'ny singa fototra amin'ny haitao mahery vaika sy ara-politika. Io no hany fitaovana izay tsy mihena ny tanjany amin'ny tontolo iainana maripana ambony ambonin'ny 2000℃. Ny tahan'ny fibre karbaona dia latsaky ny 1/4 an'ny vy, ary ny tanjaky ny fitambarana dia mazàna mihoatra ny 3500MPa, 7-9 heny noho ny vy. Ny fibre karbonika dia misy fanoherana mahery vaika, ary azo antoka amin'ny "aqua regia" azo tamin'ny famongorana volamena sy platina.
1. Fampisehoana: fisehoana fisaka, tsy misy miboiboika sy lesoka hafa, fanoherana ny hafanana avo, fanoherana ny asidra sy alkaly ary fanoherana ny harafesin'ny tontolon'ny atmosfera, hamafin'ny tanjaka, tanjaka avo lenta, tsy misy mandady, modulus avo, ambany hakitroka ary coefficient fanitarana tsipika ambany.
2. Fomba fanodinana: ny lamba fibre karbaona maro sosona dia efa natsangana tamina resin epoxy nohafarana ary avy eo notaminaina tamin'ny hafanana ambony.
3. 3k, fibre karbaona 12K, tsotra / twill, mamiratra / matte,
4. Fampiharana: maodely UAV, fiaramanidina, tabilaon'ny fandriana CT, tariby sivana X-ray, faritra fitaterana an-dalamby ary entana fanatanjahan-tena hafa, sns.
Ny orinasanay dia mamokatra tabilao misy gazy karbonika misy fanoherana avo 200 ℃ - 1000 ℃, izay afaka manohy mitazona ny fananana ara-batana amin'ny tontolo iainana miaraka amin'ny mari-pana miakatra miandalana. Ny haavon'ny haavo mirehitra dia 94-V0, izay mety hahatratra vokatra avo lenta tsy misy fiovana
Ny hatevin'ny 0.3-6.0mm dia azo namboarina. azafady azafady mifandraisa aminay raha misy zavatra mahaliana anao.
Teo aloha: Kitapo bateria fibre karbonika
Manaraka: Famolavolana kojakoja vita amin'ny fibre karbaona